Ciyaaraha aan Xirneyn 2020 - Meelaha 5-ta ah ee ugu Fiican ee Khadka Tooska ah - Ciyaar
Ciyaaraha aan Xirneyn 2020 - 5 Goobaha Ugu Fiican ee Khadka Tooska ah
Ku ciyaarista khadka tooska ah waa habka ugu fudud ee aad naftaada u madadaalin karto maalmahan. 2020 waa sanadkii raadinta habab cusub oo aad ku maaweeliso naftaada. Waxaa jira tan oo boggag internet ah iyo barnaamijyo laga heli karo internetka.
Kuwani waxay ku siinayaan waxyaabo aad u fiican oo maskaxdaada ku qaboojiya. Badanaa waa lagama maarmaan in laga nasto nolosha nolosheeda. Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso hagahan. Ujeeddadu waa inaad ku siiso shan ka mid ah bogagga ugu fiican ee lagu ciyaaro khadka tooska ah. Kuwani waa liiska ciyaaraha xayiraadaha goobaha kuwaas oo ka shaqeyn doona meel kasta. Ma jiri doonaan arrimo ku saabsan bixiyaha shabakaddaada. Isticmaalayaasha ayaa ku ciyaari kara goobtooda shaqada, guriga ama mashiinada iskuulka.
Liiska Goobaha Ugu Fiican ee Lagu Cayaaro Ciyaaraha aan Xirneyn:
Marar badan shabakadaha gaarka loo leeyahay ee dhowr urur waxay leeyihiin xannibaadyo jira. Kuwani waxay wax ku ool u yihiin yareynta howlaha waqti-luminta aan loo baahnayn. Iyadoo loo marayo shabakadaha ciyaaraha ee 'Unblocked websites', way fududaanaysaa in xoogaa nasasho ah la qaato. Qof kasta ayaa ka faa'iideysan kara fursadahaas kombuyutarkooda. Kuwani waa boggaga internetka ee ciyaarta flash flash-ka ee internetka. Waa kuwan xulashooyinka ugu fiican ee aan kala kulannay internetka.
Websaydhka 'Eunblocked' wuxuu leeyahay ciyaaro badan oo loogu talagalay qof kasta oo ku raaxeysta cinwaannada tooska ah. Waxaa ku jira qaar ka mid ah waxyaabaha caanka ah sida 'Wheels Happy', shimbiraha flappy iyo kuwa kaloo badan. Goobtu waa mid aasaasi ah laakiin waxay la timid maktabad hufan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo loogu talagalay dadka isticmaala inay sahamiyaan.
Waxaad ka heli kartaa hab fiican oo aad ku qaadato waqtigaaga firaaqada. Dad badan ayaa ku soo biira madal maalin kasta shabakadaha kumbuyuutarka ee xaddidan.Waxaan ku raaxeeyaa ciyaarta 2048 ee boggan. Waa ciyaar caan ku ah taleefannada casriga ah sidoo kale.Cinwaanka fudud wuxuu la yimaadaa farxad.
Waxaa jira ciyaaro kale oo madadaalo oo aan la koobi karayn sida tan. Bar raadinta ayaa kaa caawinaysa inaad hesho cinwaanada aad ugu jeceshahay. Way ku habboon tahay qof kasta oo ku raaxeysta astaamaha degdegga ah iyo is-dhexgalka. Websaydhku wuxuu ka shaqeeyaa shabakadaha internetka ee xiran sida dugsigaaga iyo xafiiskaaga. Eunblocked wuxuu leeyahay kaliya ciyaaro flash hada. Dhaawaca Adobe Flash ayaa goordhow xirmaya.
2. Ciyaaraha aan Xirnayn Guru
Furitaanka ciyaaraha waxay noqon kartaa hawl culus. Waxaa jira marar dhif ah bogag internet oo aad u yar kuwaas oo la yimaada ciyaaro khadka tooska ah oo cajiib ah. Websaydhada 'Unblocked games guru' websaydhka ayaa ku fiican ardayda dugsiga. Isku xirnaanta adeegsaduhu waa midabo iyo mid gaar ah. Waxa kale oo ay leedahay qaar ka mid ah nidaamyada cusub ee HTML 5. Kuwani waxay la shaqeeyaan dhammaan daalacashada casriga ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo laga heli karo barnaamijkan. Waad sahamin kartaa oo tijaabin kartaa kuwa buuxiya shuruudahaaga.
Naqshadeynta degelku waa aasaasi laakiin waxay leedahay cinwaano waaweyn. Waxaan ku raaxeystaa ciyaaraha orodka flash-ka ee websaydhka.Gangster Ace wuxuu la yimaadaa khibrad gameplay ah.Waa ciyaar gaar ah, hadana toosan. Waxay raacdaa jadwalka jadwalka xatooyada weyn.Qof kastaa wuxuu ku raaxeeyaa ciyaar danbiyeed xiiso leh maalmahan. Qofkasta oo xafiiskiisa ku caajisay wuu tijaabin karaa.
3. Ciyaaraha aan xayiran 66
Barxadku waa mid gaar ah oo aad looga jecel yahay ardayda dugsiga. In badan oo idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay tan mar horeba isticmaalaan. Waxay kuu sahlaysaa inaad si fudud ugu hesho dhammaan flash-kaaga aad jeceshahay iyo HTML 5-kulan oo bilaash ah. Waxaa jira noocyo badan iyo noocyada ciyaarta halkan. Waxaad ka ciyaari kartaa wax kasta oo ka socda isboortiga ilaa dharka. Websaydhku waa mid gaar ah oo si fudud loo heli karo. Waxay leedahay nooc fudud oo ah 'Minecraft' sidoo kale.
Dad badan ayaa u adeegsada madal maktabaddeeda ballaadhan. Tilmaamuhu waa u bilaash inuu ku ciyaaro nooca Minecraft. Waa ciyaar lacag la siiyay, ciyaartooy badan oo dhalinyaro ah ayaa ku raaxeysta barnaamijkaan. Cinwaanka ayaa qaali noqon kara. Qof kastaa ma helo ogolaansho inuu ku iibsado cayaartooda khadka tooska ah. Waxaan sidoo kale jecel nahay classics sida Flappy Bird, Slither.io iyo Tetris. Waxay shaqeysaa 100% waqtiga. Guud ahaan waxaad waqti fiican kuheli doontaa adeegan.
Booqasho - https://sites.google.com/site/unblockedgames4me/ .
4. Daaro furka ciyaaraha
Websaydhku waa ku cusub yahay dad badan. Ciyaaraha furitaanka ayaa leh cinwaano waaweyn.Waxay ka shaqeyn doontaa iskuul kasta ama shabakad xafiis. Way ka nabadgashaa xanibayaasha degellada. Badanaa websaydhka ma aqoonsana aaladahaas software. Maktabadda ballaadhan ayaa ah hantida ugu weyn. Waxaad ka heli kartaa ciyaaro badan si aad u disho wakhti. Haddii aad ku caajiso shaqada ama dugsiga, ka dib booqo degelkan.
Xiriirka isticmaalaha sidoo kale waa fududahay in la fahmo. Waad iska ilaalin kartaa xayeysiinta iyo ciladaha ciyaaryahanka hurdiga ah. Kuma tiirsana kumbuyuutarrada lagu daro. Waxaan ku raaxeysaneynaa Super Mario bros classic bogga internetka. Waxay dib u soo celinaysaa xusuus badan.
Uma baahnid emulator dambe. Booqo websaydhka oo bilaw inaad ku ciyaarto kombuyuutarkaaga. Ciyaaraha maalmahan waxay noqdeen wax iska fudud iyadoo la kaashanayo bogagga internetka. Bar raadinta ayaa kaa caawineysa inaad ku hesho cinwaanada ugu fiican si fudud.
Booqasho - https://www.unblockedgamespod.com/
5. Dunida ciyaaraha xayiran
Dunida ciyaaraha aan xirneyn ayaa ah mid fudud oo lagu daro goobaha qaabka Google. Waa mid si fudud looga heli karo kombiyuutar kasta. Isku xirnaanta adeegsadaha ee ku yaal barxadda waa aasaasi. Waxay isku dayayaan inay beel ka dhigaan shabakadooda. Isticmaalayaasha waxay ka codsan karaan ciyaaro ka socda horuumarinta iyagoo adeegsanaya qaab fudud oo google ah.
Waa adeeg aad ufiican oo daneeya dadka isticmaala. Waxaa jira tanno faashaal ah oo la heli karo. Waxaad ka dooran kartaa ciyaarta dhinaca bidix ee shaashaddaada.
Waxay leedahay tan oo xulashooyin ah oo waxtar badan leh. Websaydhku waa mid fudud laakiin kuma tanaasulayo ciyaaraha. Xiriirinta fudud waxay ka caawisaa websaydhka si looga fogaado in laga ogaado softiweerka boggaga software. Waxaan ku raaxeysaneynaa ciyaarta curveball-ka ee boggan. Waa ciyaar xiiso leh in la ciyaaro markii aad caajiso. Waxay sidoo kale leeyihiin nashqad bilaash ah oo ku saabsan ciyaarta Doom ee caadiga ah.
Booqasho - https://sites.google.com/site/unblockedgameworld/ .
Sidee looga Fogaadaa Xayeysiinta?
Xayeysiintu waa dhibaato joogto ah barnaamijyadan. Isticmaalayaal badan ayaa neceb cayayaanka joogtada ah ee aad hesho. Way kafiican tahay inaad maal gashato adeeg si fudud loo isticmaalo. A software ad-block fudud ka saari doonaa oo dhan xayeysiis dhibsado. Pop-ups sidoo kale waa dhibaato guud oo leh kuwan bilaashka ah inay ku ciyaaraan dhufto. Waa kuwan xulashada sare ee yareynta dhibaatooyinkaaga.
Soo saar xanibaha
Xannibaadda pop-up ayaa kaa horjoogsan doonta inaad hesho pop-ups xayeysiis ah oo xanaaq badan. Way fududahay in la helo umana baahna dadaal badan. Booqasho - https://poperblocker.com/ si aad tan uga hesho biraawsarkaaga.
AdBlock-ka, waxaan u soo jeedinaynaa hola ad ka saarista. Way fududahay in lagu daro kordhinta biraawsar kasta. Waxaad kala soo bixi kartaa dukaanka webka chrome.
Ciyaaraha aan xirneyn ayaa ah hab aad u fiican oo aad waqtigaaga firaaqada ku qaadato. Waad iska saari kartaa xiisaha oo yareyn kartaa walbahaarkaaga. Qof kastaa wuu ku raaxeysan karaa masraxa cajiibka ah gabi ahaanba bilaash. Tilmaamahan, waxaan ku darnaa 5 xulashooyinkayaga ugu sareeya. Kuwani waxay ku habboon yihiin dadka isticmaala jecel ciyaaraha kala duwan. Iyaga tijaabi maanta oo yaree walaacaaga.
Pony-ga Yar: Adventure-ka Maretime Bay - Taariikhda Siideynta & Tiirarka
Qadarka Indho la'aanta: Edo no Yami - Waxa aan ognahay ilaa hadda
waa safari loo heli karo daaqadaha
fursadaha ugu fiican ee lagu gooyo fiilada
qulqulka filimka aan xadidnayn oo bilaash ah
daawo filimada & bandhigyada tv -ga ee bilaashka ah
ka daawo taxanaha tv oo dhan online